Kooxda Barcelona maxey ka tiri iibinta Rakitic? %
Kooxda Barcelona maxey ka tiri iibinta Rakitic?
Laacib Sports : Wararka laga helayo Maamulka Kooxda Barcelona ayaa sheegaya in ay marnaba aysan iibin doonin Sida ay qortay jariiara Mundo Deportivo ee kasoo baxda gobolka Catalaniga kooxda Barcelona ayaa ka soo horjeesatay in ay iibinayso laacibkeeda qadka dhexe.
Laacibkaan u dhashay wadanka Croatia ee Rakatic ayaa la hadalhayay inuu ku biirayo kooxda PSG oo si wayn u dooneysa laacibka ku wanaagsan kubad abuurista iyo burburinta intaba, balse kooxdiisa ayaa gaashaanka u daruurtay in aaney iibineeynin.
Ugu dambeyntii ciyaaryahankaan heerka caalami ee dalka Croatia ayaa beec geliyay guriga uu ku leeyahay magaalada Barcelona taasoo ka tarjumeysa sida ay laacibkan uga go’an tahay inuu isaga tago kooxda Barcelona.